China All- in-one mugwagwa wekuisa muchina fekitori uye vanotengesa | ACE MACHINERY
TW-FJ Yese-in-imwe Thermoplastic Kneader Chichatara Mashini inoverengeka-inoshanda ruoko-kusunda muchina wakasanganiswa neanopisa-inonyungudika keturu uye kneader yekumaka muchina, iyo inoshanda kune madiki asi akapararira uye akapararira mapurojekiti sekuparadzanisa mujenya, chikoro, pekugara nharaunda uye fekitori. Muchina uyu mudiki muhukuru uye huremu, zviri nyore uye zviri nyore mukushanda pamwe nevashandisi vaviri chete vekushanda.
Muchina unonyanya kushanda kune madiki asi akapararira uye akapararira mapurojekiti senge nzvimbo dzekupaka, chikoro, pekugara munharaunda nefekitori. Muchina uyu mudiki muhukuru uye huremu, zviri nyore uye zviri nyore mukushanda pamwe nevashandisi vaviri chete vekushanda.
TW-FJ Zvese-mu-imwe Thermoplastic Kneader Chichatara Muchina
Outer miganhu (L * W * H) 1200X900X1100mm
Yese huremu hwemuchina 220KG
Bemhapemha zvinhu tangi chinzvimbo 120KG
Unyanzvi hwegirazi bead bhokisi 25KG
Kukora kwejasi 1.2-4mm
Bead nzira yekuparadzira Gear inotyairwa, otomatiki Bata
Kupisa kwekupisa kwekunamatira zvinhu 170-220 ℃
LPG humburumbira zvakajairwa 15KG
Chichatara upamhi 100、150,200、300mm, zvinonyanya kushanda kune mitsara yembizi ye400、50mm
Kushanda kwezuva nezuva kushanda 150m2
Inogona kushongedza ine inowedzera mutyairi, inowedzera ndiro, inowedzera chigaro？ Boosting Plate / Boosting Sachigaro
1.Hand-inotyairwa ngetani inotyaira ekumanikidza kusanganisa zvinhu zvinonyungudika, kuve kwakareruka uye kuri kubatsira mukushanda.
2.Specialized yepakati-yekumanikidza choto inogadzirirwa kushandiswa kwemaindasitiri, iyo ine yakanyanya kupisa kupisa uye nekukasira kutsanya.
3.Iyo yakasarudzika inodzora switch switch vheji yemoto mugwagwa inogona kurega iye anoshanda kuti aone mamiriro emoto wemate uye agadzirise mutungamiriri wemugwagwa wemoto uye murazvo. Saka ita kuti basa rekumaka rive rakachengeteka uye riwedzere kushanda.
4.Two zvinofamba dzokubvisa matura anodzinga chiutsi gasi munguva yekuchengetedza yakanaka yekushanda nharaunda.
5.Triple-layered bvisika mabutiro inoita kuti zvive nyore kuchenesa ketera uye nekushandura zvinhu zvinonyungudika mumarudzi akasiyana.
Tevedza mhinduro dzevatengi mushure mekugamuchira zvigadzirwa, uye edza nepatinogona napo kugadzirisa nekuvandudza mhando uye basa
pamusoro pe90% yezvigadzirwa zvinotumirwa kunze
Tichifunga nezve Exclusive Agent uye tora vatengi vedu kukura pamwe chete
1.Ndinogona here kugadzirisa iyo tambo ukobvu? Uye sei?
A: Hongu, inogona kugadziriswa nekucheka banga uye hanger. Iyo yakajairika mutsara ukobvu ndeye 1.2-4 mm.
2. Unogona here kugadzira muchina wakasarudzika?
A: Hongu, tinogona. Isu tiri mugadziri we thermoplastic mugwagwa wekumaka muchina muGuangzhou Guta.
3. Ko zvakadii mushure mekutengesa sevhisi?
A: A: Isu tine basa rekupa hunyanzvi kuraira mune hwese masherufu hupenyu. Isu tinobatsira kugadzirisa matambudziko kuburikidza neWhatsapp, Skype, uye email nekutumira mifananidzo nemavhidhiyo.
4.Ungamaka sei mitsara muhupamhi hwakasiyana?
A: A: Zviri sarudzo yako. Kazhinji, tinokurudzira kutumira kwegungwa kunopa mitengo inonzwisisika. Zvakare, zvezvipenga zvikamu, zvinogona kunge zviri muFEDX, DHL uye yavo yepasirese kuratidza ..
Pashure: Kutonhora kupopera nzira yekumaka muchina
Zvadaro: Chinyorwa Road Road yekumaka Machine
Honda Gx35 Concrete Vibrating Kupedza Screed ...
1680KG ine 0.045CBM Hydraulic Mini Excavator